Ciidamada Itoobiya ee Baladweyne Ku sugan oo u ruqaansaday Degano kale – SBC
Ciidamada Itoobiya ee Baladweyne Ku sugan oo u ruqaansaday Degano kale
Ciidamada Itoobiyaanka ah ee dhowaan la wareegay gacan kuheynta Magaalada Baladweyne caasimada gobolkaasi Hiiraan ayaa la sheegay in ay u ruqaansadeen deegaanada Bari ee Magaaladaasi.
Dadweyne ku sugan Bariga baladweyne ayaa sheegaya in ciidamada oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo Gaadiidka dagaalka ay doonayaan in ay weerar ku qaadaan degaano ku yaala bariga oo ay ku sugan yihiin xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida ay doonayaan in ay la wareegaan gacan ku heynta deegaanka Buulo burte oo ka tirsan Gobolka Hiiraan islamarkaana iminka sida la xaqiijinayo ay ku sugan yihiin ciidamada Xarakada Alshabaab.
Waxaa la tilmaamayaa in hada ay ciidamadaasi gaareen deegaan lagu magacaabo Baardheere oo qiyaastii 45km kaga beegan dhanka koonfur magaalada Baladweyne, islamarkaana ay usii ruqaansadeen deegaanada kale ee ka hoyeeya.
Tan iyo intii ay la wareegeen gacan ku heynta Baladweyne ciidamadani Itoobiyaanka ah iyo kuwo soomaali ah waa markii ugu horeysay oo ay u ruqaansadaan in ay gaaraan deegaano kale oo kuyaala gobolka, waxayna tani qeyb ka noqoneysaa weerarada ay ciidamada Itoobiya ku soo galeen gudaha Dalka Gaar ahaan Gobolka Hiiraan,